Kubazali abaningi, umbuzo wokuthenga idivayisi enhle yengane yabo ayiguquki. Ngempela, ukuze uthole okulungile, akudingeki nje kuphela ukwazi izici zalo zobuchwepheshe, kodwa futhi nezidingo nezintandokazi zomsebenzisi wesikhathi esizayo.
Izindlela eziyisisekelo zokukhetha ikhompyutha yekhompyutha yezingane
1) Isigaba sokuqala sokukhetha idivaysi ngamandla ayo. Okusho ukuthi, umhlangano womkhiqizo kufanele wenziwe ngendlela efanele futhi ngokuthembekile, futhi umzimba unomsoco omkhulu. Kumele kukhunjulwe ukuthi ikhompyutha yekhompyutha yezingane izohlala ijwayele ukuwa nokulimala okuhlukahlukene. Uma icala lizoba nensimbi, lizosebenza njenge-plus kanye nesiqinisekiso sokuthembeka.
2) Into yesibili okufanele uyiqaphele ubukhulu bomkhiqizo. Amaphilisi amanje anesilinganiso esingaba ngu-10 amasentimitha abhekwa njengobuthakathaka, ngoba ukwanda kwesayizi kwesikrini, kuphakama amathuba okulimala kokuwa. Abafana abancane ngokuyisisekelo kumele bafinyelele izinkinobho ezibonakalayo ezibucayi, ngoba izandla azikakhuli ngokwanele. Ngakho-ke, ikhompyutha yethebhulethi yezingane ezine-inch 7 amasentimitha ingcono kakhulu. Ngaphezu kwalokho, kulula kakhulu, okusho ukuthi ingane izokhululeka kakhulu, ngoba ngemithwalo ende futhi enzima, akekho noyedwa ofuna ukubhekana nayo.
3) Uma sikhuluma ngenxenye yesofthiwe, kufanelekile ukusho ukuthi abaningi abaqapheli ukukhetha ukuthi iyiphi i-computer yekhompyutha ye-tablet ezosebenza: i-Android noma i-iOS. Lapha, umzali ngamunye kufanele azikhethele yena. Omunye kufanele aqaphele iqiniso lokuthi esimweni sokuqala kungenzeka ukulanda inombolo engapheli yemidlalo ethuthukayo, izikhathi zokuqeqesha, amafilimu, njll. Ngesikhathi sesibili kungenzeka konke ukuthola, kodwa ngenani elithile, ngoba ukurekhoda okujwayelekile kwezicelo kumadivayisi we-Apple kudinga umzamo omkhulu.
4) Ukuboniswa ngokwawo kubhekwa njengento ehlukile. Umgomo wekhwalithi ulula - ukhanyisa futhi ushaya isithombe, ngcono ubuchwepheshe be-IPS. Kodwa uma ingane ingasebenzisi idivayisi kaningi kakhulu, khona-ke ungagcina imali ngokuthatha ikhompyutha yethebulethi kubantwana abane-TFT-matrix.
5) Ngomntwana, okuqukethwe okungaphakathi kudlala indima enkulu kunaleyo. Kunconywa ukuthatha idivayisi ukucabangela izidingo ezishintshayo zomntwana, ukuthenga umkhiqizo ongabanelise ngokugcwele iminyaka eminingana. Ngemuva kwalokho, namuhla ingane ithanda ukubuka izithombe, futhi kusasa kungenzeka ukuthi ifuna ukudlala imidlalo eminwe, ngoba iziphi ezinye izici ezinamandla zensimbi zangaphakathi ezidingekayo.
6) Kudingeka ucabange ngesidingo se modemu ye-3G eyakhelwe kukhompyutha yekhompyutha. Ukubuyekezwa kwezinhlobonhlobo ezikhona zamamodeli kunikeza ukukhetha kwezinketho eziningi ezinjalo. Uma ukuhamba nengane kwenzeka kaningi, ngakho-ke kufanelekile ukukhetha imodemu ene-intanethi esheshayo, ngakho-ke idivaysi ingaba yinto engabalulekile kuphela kumntwana, kodwa kubazali abasezimo ezifanayo.
Ikhompiyutha yethebhulethi eyithengiwe yezingane ingabi nje ithoyizi elithakazelisayo, kodwa futhi nencwadi enokuthuthukisa ekwazi kahle ngezinhlelo ezikhethiwe ngokukhethekile, imidwebo kanye nezinkinga zezibalo.
Amaqiniso angu-9 acasulayo mayelana nemikhiqizo nezinqubomgomo ze-Apple
Indlela ukukhetha A4 laminator - izincomo kanye nokubuyekeza. Isilinganiselwa A4 laminators. Ifilimu laminating A4
I7 processor 2600 Ukucaciswa, ukuhlolwa kanye nokubuyekeza
Iyini ukukhishwa? Incazelo
Ikati bayiziphukuphuku: lokhu zohlobo lezihlakaniphi
Izibuyekezo - MTS-credit card. Credit card MTS-Bank: kanjani ukuba uthole, imibandela yokubhalisa, isithakazelo
Peppers utamatisi ebusika. Zokupheka umhlabeleli